Proverb Aza dia kely fisian-kavana loatra. [Veyrières 1913 #1056, Rinara 1974 #438, Cousins 1871 #378]
Proverb Aza manao an-tohim-bato aman-kavana. [Veyrières 1913 #1058]
Proverb Aza manao toy izany, fa mahasaro-poserana aman-kavana. [Veyrières 1913 #1061]
Proverb Aza mifanadidy, fa ny havanao tsy mahasora-tena toa voantango. [Veyrières 1913 #1065, Cousins 1871 #608]
Proverb Basy atifikavana ka arangaranga ihany. [Rajemisa 1985]
Proverb Fitsarana tsy atendry havana. [Veyrières 1913 #3386]
Proverb Havana manajary ny havana. [Veyrières 1913 #1074]
Proverb Havana mpanavangavana. [Veyrières 1913 #1075]
Proverb Havana tsy ahina. [Veyrières 1913 #1076]
Proverb Ilay nanoroka afenana, ka tsy nisy toa an-drahavana. [Rinara 1974 #1412]
Proverb Ilay nisoro-boanantsindrana : ny kely hita anajan-kavana. [Veyrières 1913 #76]
Proverb Mahagaga ny marina, fa ny taim-borontsiloza avy no tsy ambara havana. [Rinara 1974 #1841]
Proverb Ny andriamanjaka tsy mba manan-kavana, tsy manana iray tampo. [Veyrières 1913 #299]
Proverb Ny fahafatesana zara hetra tsy azon-kavana soloana. [Rinara 1974 #2943]
Proverb Ny fangaraka aza mahalevin-drenibe. [Veyrières 1913 #2319, Cousins 1871 #2213]
Proverb Ny havana ihany no manavangavana. [Rajemisa 1985]
Proverb Ny lalàna tsy itiavan-kavana ary ny didy tsy ananan-tiana. [Rinara 1974 #3067]
Proverb Ranonorana mikotro-dririnina, ka manimba ny tsaramason-kavana. [Rinara 1974 #3711]
Proverb Tanala mihaza : izay azo kely zaraina aman-kavana. [Veyrières 1913 #3216, Cousins 1871 #2991]
Proverb Tantanam-by sy tsofa vy: havana manajary havana. [Richardson 1885]
Proverb Tenenin-kavana imaso, mampitsivalana atody hao. [Cousins 1871 #3075]
Proverb Tsy ambara havana izay fanao laro no mahamety azy. [Veyrières 1913 #1338]